बेसार से’वन गर्दा जान्नैपर्ने पाँच मुख्य कुरा यस्ता छन् – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यबेसार से’वन गर्दा जान्नैपर्ने पाँच मुख्य कुरा यस्ता छन्
बेसार से’वन गर्दा जान्नैपर्ने पाँच मुख्य कुरा यस्ता छन्
बिबिसी , हाम्रो भान्सामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने बेसारमा औ’षधीय गुण भएको कुरा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएका बेला शरीरको रोग प्र’तिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन बेसार से’वन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दिने गरेका छन्। तर अत्यधिक मात्रामा बेसार से’वन गर्दा तथा बजारमा बेचिने मिसावट भएको बेसार प्रयोग गर्दा शरीरलाई लाभभन्दा हा’नि बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। आफ्नो शरीरको तौलअनुसार कति बेसार खानु हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउनु आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्।
नेपाली भान्साको अपरिहार्य उक्त ‘मसाला’को गुणस्तरबारे पनि सर्वसाधारणहरू स’जग रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत् कोरोनाभाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्देशिकामा पनि दैनिक रूपमा खानामा बेसार प्रयोग गर्न सुझाइएको छ। बेसारले शरीरमा उत्पन्न वि’षाक्ततालाई न’ष्ट गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय बेसारको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जसको सीधा साइनो खपतसँग जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर विज्ञहरू भने पर्याप्त ज्ञानबिनै बेसार प्रयोगले विभिन्न किसिमका स’मस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन्।
आयुर्वेदमा पनि रुचि राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत औ’षधि चिकित्सा विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डा. सम्मोद आचार्य हजारौँ वर्षदेखि नेपालका अधिकांश स्थानसहित दक्षिण एशियाका विभिन्न क्षेत्रमा बेसार से’वन गरिँदै आएको भए पनि यसको मनपरी प्रयोग निकै घा’तक हुनसक्ने बताउँछन्। बेसारले कोरोनाभाइरस मा’र्छ वा त्यसको सङ्क्रमण हुन दिँदैन भन्ने दा’बीको वैज्ञानिक प्रमाण छैन “रुघाखोकी लागेका बेला एकदुई दिन बेसारपानीमा राखेर पिउँदा स’मस्या हुँदैन। तर धेरै बेसारपानी अनियन्त्रित रूपमा खाँदा भने यसले राम्रो गर्छ भन्न सकिँदैन,” उनले भने।
अझ बजारमा पाइने मि’सावटयुक्त बेसारले त क्यान्सरसहित अन्य विभिन्न ज’टिल रो’गको ख’तरा रहने उनी बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक गङ्गाप्रसाद खरेल पनि आचार्यसँग सहमत छन्। उनी भन्छन्: “मानव शरीरमा बेसारको महत्त्वबारे धेरै अनुसन्धान गरिएको छ र यसले शरीरको प्र’तिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। तर बेसारको अ’त्यधिक प्रयोगले भने दी’र्घकालीन रूपमा स’मस्या उत्पन्न गराउन सक्छ।” तराई र पहाडी जिल्लामा भान्सामा तरकारी र दालमा प्रयोग हुने बेसारको मात्रा ठिक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अत्यधिक बेसार से’वनले मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई ख’तरामा पार्ने तथा ए’लर्जीदेखि क्या’न्सरसम्मको जो’खिम रहने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कलेजोमा पनि यसले स’मस्या पार्ने बताइन्छ। अ’त्यधिक बेसार से’वन गर्दा हुने हा’निबाहेक बजारमा उपलब्ध बेसारको गुणस्तर पनि चि’न्ताको विषय हो। नेपाली बजारमा उपलब्ध बेसारमा ‘ले’ड क्रो’मेट’ मिसाइएको पाइने गरेको छ। उक्त अ’खाद्य मिश्रण बेसारमा पहेँलो रङ्ग ल्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसबाहेक विद्यालयहरूमा प्रयोग हुने ख’री (च’क) र स्टा’र्च मिसाइने गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
“तर विगतमा जस्तो एकदमै धेरै परिमाणमा त्यस्तो मि’सावट भने हुने गरेको पाइएको छैन। बजारबाट सामान आफैँ ल्याएर गरिने परीक्षण र बेसार लगायतका मसला उत्पादन गर्नेहरूको सामान अनुमति लिने वा त्यसको नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्य परीक्षण गरिने हुँदा स’मस्या घ’टेको छ,” विभागकी महानिर्देशक म’तिना जोशी वैद्यले भनिन्।
तपाईलाई रु’घा, खो’की ज्वोरो आएको छ ? कस्तो अबस्थामा अस्पताल जाने ?
बिहान खाली पेटमा यी चीज नखानुहोस्
पर्यटनमन्त्रीलाई लालबाबुको कडा जवाफ – ‘दुई दिन मात्र किन ? सात दिन नै बिदा दिऔं’
कोरोनाभाइरसबाट बच्न आश्चर्यजनक उपाए , गाईको पिसाब र गोबर , प्रयोग गर्ने विधिसहित